I-KN95 Engcono Kakhulu Elahlwayo Yemaski ye-OEM Respirator yobuso bemaski kn95mask China YQD95 KN95 Umkhiqizi Wemaski Yobuso Nefektri | I-Yuanqin
Isihlungi sokuvikelwa kwento esebenzayo ye-carbon particulate...
Umhlinzeki Wokuthengisa Okushisayo Ubuso Obuvikelekile Obuvikela Uthuli M...
Isihlungi Sekhala Esigoqekayo Sekhwalithi Engcono Kakhulu esingu-3d esiphefumulayo esimhlophe ...
I-KN95 Disposable Mask OEM Respirator Facemask kn95mas...
I-KN95 Imaski Elahlwayo ye-OEM yokuphefumula Imaski yobuso kn95mask China YQD95 KN95 Imaski Yobuso
Umsuka: Shanghai, China
Incazelo Yomkhiqizo: Imaski yesihlungi sokuvikela izinhlayiya - ilahliwe imaski yokuhlunga uthuli engu-N95.
1. Ukusetshenziswa kweribhoni yohlobo lwe-headband akulula ukuwa, musa ukugunda izinwele.
2.Isiqeshana se-nose-beam sangaphandle esilungisekayo, izinto ezenziwe nge-PP-Duble iron,impahla yomugqa wesipontshi eyakhelwe ngaphakathi ngesipontshi se-Close-cell polyester,igqoka ngokunethezeka. Ukuqina okuhle nokuvikela ukuphefumula okusebenzayo.
3. Ukuphotha kwendwangu engalukiwe, ukuzwa okuthambile nokunethezekile, ukukhanya nokuphefumula, indwangu engalukiwe yekhwalithi ephezulu encibilikisiwe, ingahlunga ngempumelelo amagciwane nezinye izinhlayiya eziyingozi. Izinto ezingavuthiwe ezinhle kanye nokwakheka, ukumelana nokumunca/ukuphefumula kuphansi kunezindinganiso zamazwe ngamazwe, ukuze ukuphefumula kukhululeke kakhudlwana.
Izinto ezinhle kakhulu zokulwa nokunciphisa, ngemva kokuhamba ibanga elide olwandle, izinga lokushisa eliphezulu kanye nemvelo enomswakama ophezulu, isengakwazi ukufeza ukusebenza kahle kokuhlunga kwezinhlayiya ezingenawo amafutha ngaphezu kuka-95%.
Idizayini egoqayo, ukupakishwa kwesiqephu esisodwa, kulula ukukuthwala, kulula ukubamba imaski, gcina imaski ihlanzekile.
1pcs/isikhwama,25 izikhwama/ibhokisi lombala,24 amabhokisi/ibhokisi (600pcs/cnt)
Isisindo esiphelele ngebhokisi 7.2KG
Usayizi webhokisi ngalinye 400X550X550(CM).
Ulimi Lwephakheji IsiNgisi
I-Patent Idizayini yobuso be-smiley eyingqayizivele, enegunya lobunikazi bomklamo.
Uhlobo lomkhiqizo Imaski yesihlungi esigoqa uthuli
Isitayela semaski Isembozo sekhanda esongeka
Umbala ojwayelekile mhlophe
Iyunithi ye-valve yokuphefumula Cha
Isitifiketi I-NIOSH N95, TC-84A-9276
Izinga lokwenziwa I-NIOSH 42 CFR 84
Ububanzi besicelo i-anti-non-oily particulate matter, amaconsi, ama-aerosols nolunye uthuli olunobuthi noluyingozi. Ifanele ukushisela, ukumba izimayini, ukuphonsa, ukwenza imithi, ukupholisha nokulungisa izinkuni neminye imikhakha. I-anti-flu and virus transmission,
Isistimu yokuphatha ikhwalithi eqinile, abakhiqizi ngesitifiketi se-IOS9001. I-TSI8130, idivayisi yokuhlola ethengwe e-United States, okwamanje iyithuluzi lokuhlola imaski lezinga eliphakeme kakhulu emhlabeni. Qinisekisa ukuthi imaski ngayinye ihambisana nezidingo zobuchwepheshe ze-N IOSH N95 e-United States.
Imikhiqizo idayiswa e-United States, Japan, Europe, South America, Southeast Asian countries, iye yaqashelwa kabanzi futhi yanconywa ngabasebenzisi.
Okwedlule: Ifektri Eshibhile Eshisayo Elahlwayo ye-Ffp2 Respirator - YICHITA Ama-mascarilla Okuvikela Okungezona Ezokwelapha FFP2 Custom Face Earloop Fabric Face Mask – YQ
Olandelayo: Ikhwalithi Engcono Kakhulu ye-3d Ukugoqa Ukuphefumula Okumhlophe Kwekhala Isihlungi se-Kn95 Respirator Face Mask
Amamaski Obuso Alahlwayo Kn95
I-Kid Kn95 Mask
I-Kn95 Medical Mask
I-Kn95 Imaski Yokuhlinza
I-Wholesale Kn95 Mask
Ikhwalithi Engcono Kakhulu ye-3d Folding Breathing White Nose Fi...
Umhlinzeki Wokuthengisa Okushisayo Ovikela Ngokwezifiso Ukuvikela Uthuli F...